Mota inobhururuka yeBMW yakapa official Certificate of Airworthiness |
Location: musha » Kutumira » Nyika | Dunhu » EU » Mota inobhururuka yeBMW yakapa official Certificate of Airworthiness
Mota inobhururuka yeBMW yakapa official Certificate of Airworthiness
Mushure mekunge vapedza maawa makumi manomwe e "kuyedzwa kwakasimba kwendege," iyo yaisanganisira anopfuura mazana maviri ekusimuka uye kumhara, Slovak Transport Authority yakapa "Yepamutemo Chitupa Chekufamba Nendege" kune Klein Vision AirCar inofambiswa ne1.6-litre BMW injini, inogona kushandura kubva mumotokari yemugwagwa kuita ndege diki.
Sekureva kwaKlein Vision, kuyedzwa kwese kwendege kwaive kutevedzera zvizere European Aviation Kuchengetedza Agency (EASA) mitemo.
"Miedzo yakaoma yendege yaisanganisira huwandu hwakazara hwekubhururuka uye mafambiro ekuita uye yakaratidza kushamisa kunoshamisa uye kugadzikana kwakasimba mumodhi yendege," Klein Vision akadaro mukuburitswa kwenhau.
The Klein Vision AirCar inomhanya pa "mafuta anotengeswa pane chero chiteshi chepeturu," Anton Zajac, mubatsiri weKlein Vision, akadaro. Motokari inogona kubhururuka pahupamhi hwekushanda hwe18,000 tsoka, akawedzera. Zvinotora maminetsi maviri nemasekonzi gumi nemashanu kushandura kubva mumotokari kuita ndege. Mapapiro nemuswe zvinopeta otomatiki pakutyaira mumugwagwa.
Mutauriri wekambani yeKlein Vision akatiwo rezinesi remutyairi wendege rinodiwa kuti rikwanise kutyaira motokari iyi. Akataura tariro yekuve neAirCar inotengeswa mukati memwedzi gumi nemaviri.
Muna Chikumi, mota inobhururuka yakapedza maminetsi makumi matatu neshanu kuyedza ndege pakati penhandare dzendege muNitra uye guta guru reBratislava muSlovakia. Mushure mekumhara, ndege yakashandurwa kuita mota ndokuendeswa pakati peguta.
"AirCar certification inovhura musuwo wekugadzirwa kwakawanda kwemota dzinobhururuka dzakasimba. Zviri pamutemo uye chisimbiso chekupedzisira chekugona kwedu kushandura nzendo dzepakati nekusingaperi, "mugadziri weAirCar Stefan Klein akadaro.
BMW yakatanga semugadziri weinjini yendege, asi mushure meWWI Germany yakarambidzwa kugadzira ndege kana injini kwavari (kwemakore mashanu). Saka, kambani yakashandura kugadzira midhudhudhu nemotokari. Muna 1924 vakatangazve kugadzirwa kweinjini dzendege, uye pakupedzisira dzakamira muna 1945. Chiratidzo chine mavara mana chine mavara mana chinomiririra chinotenderera yendege.
avhiyesheni Jerimani permiti senga
Mapurisa akafona kana vafambi vakaita mhirizhonga paIstanbul Airport
Ndira 26, 2022 pa19: 15
Ndaiziva kuti vaizoita kuti mota dzifambe munguva pfupi iri kutevera asi izvi zvakakurumidza kupfuura zvaitarisirwa. Iwe hautaure kuti mutengo weizvi ungangove uri.